Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » बेसार खानुहुन्छ नि ? यसरी खाए चमत्कारी फाइदा छन्, थाहा पाउँनुहोस्
बेसार खानुहुन्छ नि ? यसरी खाए चमत्कारी फाइदा छन्, थाहा पाउँनुहोस्
काठमाडौं : प्रायजसो व्यक्तिले बिहान उठ्ने वित्तिकै मन तातो पानी पिउने गर्छन्। कसैले मन तातोपानीमा मह वा कागती मिसाएर पिउने गर्छन् भने कसैले नुन राखेर पिउने गरेका हुन्छन्। तर बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पेटमा मन तातो पिउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदा नै हुन्छ।